I-KISS: Ukulula kuyisihluthulelo sempilo ephumelelayo
Ukwenza izinto zibe lula kuyisihluthulelo sokuphila ngempumelelo
ULwesihlanu, February 5, 2010 ULwesibili, April 1, 2014 U-Travis Smith
Umculi nombonisi UNick Dewar udlule emhlabeni kuleli sonto. Usebenze ezinkampanini eziningi ezahlukene kusuka I-Atlantic Monthly ku-Random House, ukuhlinzeka ngemifanekiso enokuqonda kumagama athakazelisayo ku-athikili noma encwadini. Umsebenzi wami owuthandayo uNick Dewar ukhombisa ifilosofi yami yobungcweti neyami:
Ukwenza izinto zibe lula kuyisihluthulelo sokuphila ngempumelelo.
Lokhu ukuphinda kuchazwe ngobungcweti nobugagu besikhathi esivivinyiwe se-KISS indlela:
Cha, hhayi lokho KISS -
Umgomo we-KISS -? Gcina It Simple, Stupid.?
Lokhu kungukuhumusha kwesimanje kwe-Occam's Razor, ethi? Izinhlangano akumele ziphindaphindwe ngaphezu kwesidingo ,? noma ngokujwayelekile, 'isu elilula kakhulu liba yilo elihamba phambili.
Manje kungani ngikutshela lokhu? Kungani ngihudulela isazi sefilosofi se-14th Century, u-Ace Frehley, kanye nomScotman osanda kushona kubhulogi? Ngoba emphakathini wethu osheshayo, wobuchwepheshe obuphezulu, ohlala njalo, sikhohlwa ngokuzama ukuxazulula izinkinga ngezixazululo ezilula. Imvamisa wonke umuntu ufuna ubuchwepheshe obusha noma indlela entsha yokuxazulula inkinga lapho singasebenzisa izixazululo ezilula ezidinga izindleko ezingatheni futhi zinikeze izinzuzo zesikhathi eside ezingcono.
Le filosofi ikhuluma nangezici zemikhiqizo. Ukuthi umkhiqizo wakho unezici eziningi akusho ukuthi uzohlangabezana nezidingo zamakhasimende akho. Uma ungazethembi ekuqondeni kwakho amakhasimende akho? izidingo, unenkinga enkulu, ebaluleke kakhulu kunalokho okufanele ukwenze. Udinga ukuqonda kangcono abasebenzisi bakho, amakhasimende akho, kanye nawe uqobo. Musa nje ukwelapha izimpawu. Yigcine ilula, bese uthola ukuthi kwenzekani ngempela. Futhi khumbula -
O, futhi futhi khumbula ukuthi i-KISS nayo imnandi kakhulu!
Esikhathini Se-Inthanethi Amakhasimende Awakwazi Ukuziba
I-AT & T Ethandekayo ye-U-Verse